Home > School News > Super Bowlka
Qoysaska sharafta leh Justice Page Middle School,
Waxaad warbixino ku qoran email ama Taleefanka uu kuugu soo gudbin doona Kormeeraha Guud ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis Ed Graff, warbixino aad muhiim kuugu ah ee ku saabsan Super Bowl. Hadii aadan fursad u helin in aad wax ka ogaato, Waxaan kugu dhiiri galinyaa in wax ka ogaato macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan waxyaabaha ka dhacaya degmada oo dhan, iyo sida aan ugu diyaargaroobeyno xafladaan munaasabadda saameynta ay ku yeelan kareyso dugsiyadeena.
Dugsigeenu Justice Page Middle School, waxaan diirada saareynaa in aan waxbarno ardayda kuna dadaalno ammaanka iyo nabadgalyada ardayda inta ay socoto Xaflada Munaasabadda Super Bowl-ka ee lagu qabanayo Magaaladda January 29 ilaa February 5. Waxaan kugu marti galinaynaa in aad nala wadaagto dadaalkaaga. Waxaa halkaan kuugu lifaaqan ilo kheyraad oo lala wadaagayo shqaalaha sidii ay ardayda u dhowri lahaayeen nabadgalyadooda inta ay socoto munaasabada xafladaan. Hadii aad wax ka shakido, ama aad aragto, soo sheeg. Wada jirkeena waqtigaan xaadirka ah waxaan badbaadin karnaa ammaanka dhamaan dadka oo dhan.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan xasuusiyo qoysaska in fulinta xeerarka soo xaadirka dugsiyada in uu jiro inta ay xafladaan socoto. Waa in aad ku soo wargalisaa dugsiga qoraal ama soo wacdaa xafiiska guud hadii aad maqnaanaysiin 612.668.4040.
Fadlan nala soo xiriir hadii aad ka walaacsan tahay ama aad wax masuugeysid. Waad Mahadsan tihiin!